Boya Workshop - Yixing Boya Nyowani Zvinyorwa Technology Co., Ltd.
Isu tinogadzira sei zvigadzirwa zvemhando yepamusoro?
Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro ndechimwe chezvinhu zvakakosha kuti kambani iende kwenguva refu. Takazvipira kupa vatengi mhando, hutano, kuchengetedzeka uye hupfumi kurongedza zvinhu kuti uwedzere kukosha kwechigadzirwa chako.
Zvimiro zvemidziyo yedu:
Multi-rukoko dhizaini, chigadzirwa chinoshanda chinogona kuve bespoke zviri nyore zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu nekushandura chaiyo rukoko zvinhu. senge PE, PA, EVOH, PP ect;
Otomatiki ukobvu kudzora systerm, needu epamberi otomatiki ukobvu kudzora system iwe unogona kuva neicho chaicho ukobvu hwaunoda!
Kubuda pachena, Kunze kwekufema firimu isu tinogona zvakare kukupa iwe mvura yekudzima firimu nekujeka kwakakosha.
Tinotenda kuti: chaiyo, yakasimba uye yepamusoro michina inogona kugadzira yakanakisa chigadzirwa.
Yakasimba QC system
Nei tichigona kukuvimbisa iwe mutengo wemakwikwi?
Boya zvachose ane gumi nemashanu michina yakabatanidzwa, yega yega kana maviri michina yakanangana nechigadzirwa chimwe chete neyakagadziriswa maneja uyo ane makore anopfuura gumi ane ruzivo rwekuchengetedza muchina .Nenzira iyi isu takavandudza kugadzirwa uye kudzikisa mutengo zvakare inguva yekuchengetedza. Mari dzese dzatakachengeta dzakapihwa vatengi vedu.